Xiaomi Mi6 Ceramic Edition သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောင်းထွက်ခဲ့သည် Androidsis
Xiaomi Mi6 ကြွေထည်ပစ္စည်း ဒီကနေ့ရောင်းသွားပြီးပြီ။ တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရသစ်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်း terminal မှ ၀ ယ်လိုအားမှာအလွန်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သူတို့ရောင်းလိုက်ပြီ စက္ကန့်တစ် ဦး အမှု၌တည်၏။
ဒီနေ့ကုမ္ပဏီလည်း စတင်ရောင်းချခဲ့သည် သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် Mi6 ၏အထူးကြွေထည်မြေထည်ထုတ်ဝေမှုနှင့်စမတ်ဖုန်း၏စံဗားရှင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာနှင့်ယခုအချိန်တွင်ရောင်းထွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို Xiaomi ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့ရသည်.
Mi6Ceramic Edition၊ အလွန်လိုချင်သော terminal
Xiaomi Mi6 Ceramic Edition ကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည် 435 ဒေါ်လာ (တရုတ်နိုင်ငံ၏တရားဝင်စျေးနှုန်းမှာ ၂၉၉၉ ယွမ်ဖြစ်သည်။ ) ယခုအချိန်တွင်မူ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်နှောင့်နှေးမှုမရှိပါကယူနစ်အသစ်များတည်ရှိပြီးမကြာမီရောင်းချတော့မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဒီကိရိယာပတ်ပတ်လည်အလွန်ကြီးစွာသောမျှော်လင့်ချက်။
အပြင် ကြွေထည်ကိုယ်ထည် နှင့် 18 Karat ကိုရွှေ hoops သင်၏ကင်မရာကိုအလှဆင်ထားသော terminal သည် Xiaomi Mi6 ၏စံပုံစံနှင့်တူညီသည် ၅ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင် နှင့်ပေါင်းစပ် Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာ လိုက်ပါသွား Qualcomm မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည်6GB RAM မှတ်ဉာဏ် y GB အထိသိုလှောငျ 128 Non- ချဲ့နိုင်ပြည်တွင်းရေး။
၎င်းတွင်ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည် ကင်မရာနှစ်လုံး (အကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူးနှင့်တယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူး) အရည်အသွေးကျဆင်းမှုမရှိဘဲ 12x zoom ကိုထောက်ပံ့ပေးသော2MP နှစ်မျိုးလုံး။ ရှေ့ကင်မရာမှာ 8 MP Sensor ပါရှိပါတယ်။
အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည် 3.350 mAh ဘက်ထရီရှေ့ဖက်ရှိလက်ဗွေစကင်နာနှင့် MIUI ပါ ၀ င်သော Android 7.1.1 Nougat ။
စပိန်တွင်ယူရို ၆၀၉ ခန့်ရှိပြီးအချို့သောသွင်းကုန်များမှတဆင့်၎င်းကိုကြိုတင်မှာယူရန်ဖြစ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi Mi6 Ceramic Edition သည်လျင်မြန်စွာရောင်းထွက်ခဲ့သည်
သင်၏ Launcher ၏အိုင်ကွန်များကို Root မလိုအပ်ဘဲမည်သို့ပြောင်းလဲရမည် (Samsung ၏ Touchwiz အတွက်မှန်ကန်သည်)